यो बर्षको दशैँसम्म लामो दूरीका गाडी चल्न के गर्लान ? यसो भन्छन व्यवसायी – Dainik Sangalo
यो बर्षको दशैँसम्म लामो दूरीका गाडी चल्न के गर्लान ? यसो भन्छन व्यवसायी
September 4, 2020 470
तर यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्छन्, “पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । ”गोरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
करिब छ महिना बन्द भएका लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको व्यवासायीले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पहिला अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको तर पछि मध्यम प्रभावितमा राखेर राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको व्यवसायीको भनाइ छ । स्वाँरका अनुसार सरकारले मध्यम प्रभावित भनिदिएपछि बैङ्कले कर्जा तथा ऋणको किस्तामा कुनै सुविधा दिँदैनन् ।
Prevबागलुङमा शव भेटिएका १४ मध्ये चार जनाको शव सनाखत
Nextखेतबाटै तरकारी बिक्रीपछि किसान खुसी
आज विभत्स दोरम्बा ह, xत्य का, x ण्ड मच्चाइएको दिन १९ जना मान्छे मा, xरि, ए
बसको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्दा ट्रकले ठक्कर दियो, युवकको घटनास्थलमै मृ’त्यु, को हुन उनी हेर्नुस